Ukwelashwa komdlavuza wesi-prostate kwa-Israyeli
Umdlavuza we-prostate (umdlavuza wesifo sofuba) yisifo esivame kakhulu esiyinkimbinkimbi phakathi kwabantu besilisa. Umdlavuza we-prostate uthinta abantu abayizinkulungwane ezingamakhulu amane ngonyaka. Lezi zifo ziphakathi kwezimbangela eziyinhloko zokufa kwabantu, ikakhulukazi emva kweminyaka engu-45-50. Futhi, ukuthuthukiswa kwalesi sifo kungabangela ukubhema, ukusebenza ezimbonini ezilimazayo, ukuhlukunyezwa kokudla okunamafutha. Lesi sifo singakhula ngesisekelo sezinye izifo ezithathelwanayo zegciwane le-genitourinary.
Ukukhula kwe-tumor ku-prostate gland kuholela ekucindezelweni komgudu wamanzi, ukulukhuni ukuchama, ukudakwa komzimba ngemikhiqizo exretory of excretion. Uma ifomu liqalisiwe, i-tumor ihluma phakathi kwezicubu eziseduze ne-prostate gland kanye ne-metastasizes.
Ekudleni, ukwabiwa kwezigaba ezine zesifo:
Esikhathini sokuqala, lapho i-tumor ingatholakali ngesikhathi sokuhlolwa.
I-tumor itholakala ngenkathi kuhlolwa, kodwa okwamanje ayithinti izicubu nezinhlangothi eziseduze.
I-tumor ihluma ezinhlobonhlobo eziseduze.
Izimpawu zesifo somdlavuza we- prostate
Kunzima ngokuchama (ubuhlungu, ukucindezeleka, ukugcinwa kwamanzi).
Ubuhlungu lapho i-sperm ifihliwe.
Ubuhlungu endaweni yangemuva, okhalweni, i-perineum, namathanga.
Ukubonakala kwegazi emcimbini.
Ukuxilongwa komdlavuza we-prostate
Ukutholakala kwaleso sifo ngesikhathi esifanele kunzima ukuthi isigaba sawo sokuqala siphume ngaphandle kobuhlungu obukhulu nezinye izimpawu eziphazamisayo, kanti lesi sifo, ngenxa yobukhulu bayo, asitholakali ekuhlolweni kwe-digital rectal. Ngalesi sigaba, i-tumor ingatholakala ngengozi, ngesikhathi sokusebenza nokuhlolwa okuhlobene nezinye izifo. Amaphesenti angama-20-25% amacala atholakele.
Izindlela zokuhlola zanamuhla zihlanganisa:
Gcwalisa inani legazi
Ukuhlolwa kwegazi kwe-PSA (i-anti-prostatic specific antigen)
I-Ultrasound ene-rectal sensor
Ukuhlola i-radioisotope ye-squelegraphy
CT kanye ne-PET / CT.
Ukuxilongwa okufanele kudinga ukuhlolwa okuningiliziwe usebenzisa imishini yanamuhla, ngoba ukutholakala kwalesi sifo kunenkinga eminingi. Ngakho-ke, izinga le-PSA lingakhuphukela kwezinye izizathu (isibonelo, ngokushesha ngemuva kokulala ngokocansi), futhi izimpawu zomdlavuza wesifo sofuba ziyisici sezifo eziningi.
Imiphumela yokuhlolwa ihlolwe yi-urologist, i-uro-oncologist, umsakazo-oncologist kanye nodokotela ohlinzayo ngenhloso yokwelapha ngokunembile nokukhetha ukwelashwa. Njengoba ezinye zezindlela ezisetshenziselwa ukwelapha umdlavuza we-prostate zibandakanya imiphumela emibi, odokotela bangasikisela isiguli ngokwakhe ukuba akhethe indlela yokwelapha oyifunayo kulabo abafanelekile kuye.
Ukwelashwa kokuhlinzwa komdlavuza wesi-prostate kwa-Israyeli
Ukuqhuba umsebenzi we-classic usebenza kahle ekuqaleni, lapho isisu singenawo isikhathi sokuhluma kwezinye izicubu. Ezimweni eziningi, odokotela abahlinzayo base-Israel basebenzisa i-laparoscopy (ukungenela okuhlinzekwa kancane okungenasidingo), kuhlanganise nokusebenzisa i-robot yokuhlinzwa eDa Vinci. Nokho, inqubo yakamuva ye-ultra-yesimanje isasebenza kakhulu kakhulu.
Ukwelashwa ngokwemvelo komdlavuza wesi-prostate kwa-Israyeli
Ukwelashwa kwezidakamizwa kusetshenziselwa isisu esingenakusebenza, ikakhulukazi ezinyathelweni eziseduze zalesi sifo.
I-radiotherapy enamandla kakhulu (i-IMRT) isebenza kahle lapho kutholakala khona izicubu ezingxenyeni okunzima ukufezekisa ukwelashwa kwemisebe evamile, kuhlanganise ne-prostate gland. Le ndlela entsha ikuvumela ukuba ulungise amandla okuchayeka kwesikhashana esisodwa. Isikhathi se-IMPT sithatha kusukela emizini eyishumi nanhlanu kuya kwesigamu sehora, futhi yonke inkambo yokwelashwa yenzelwe amasonto amaningana.
I-Chemotherapy ekwelapheni umdlavuza wesi-prostate ku-Israyeli namuhla isetshenziselwa kuphela kwezinye izimo ezingavamile: ukwelashwa komdlavuza wesigaba sesine kanye ne-squamous cell carcinoma, kuhlangene nokwelashwa kwama-radiation.
I-Brachytherapy - ukwethulwa kwe-isotopu emsakazo ku-tumor nge-sindle (ngokuvamile i-palladium noma i- iodine yama-radioactive) ukuze igxilise amangqamuzana omdlavuza ngaphakathi. Ngenxa yendawo eqondile ye-nuclei e-tumor, ukuqina kwemisebe kungakhula izikhathi ezimbili kuya kathathu, uma kuqhathaniswa ne-radiotherapy evamile, eyathinta nezicubu ezinempilo. Le ndlela inemiphumela emibi, ikakhulu ingaba nomthelela omubi kumaseli anempilo emzimbeni, kodwa angaphansi kwezinye izindlela zendabuko zokwelashwa komdlavuza wesicathulo. Kungenzeka futhi kwenzeke ukuphazanyiswa nokuvuthwa, kodwa kudlule isikhathi esisodwa kuya kwezinyanga ezimbili.
Ukwelashwa kwama-hormonal ekwelapheni umdlavuza wesi-prostate kwa-Israyeli
Lisetshenziswa ku-Israyeli ekwelapheni umdlavuza wesi-prostate ezinyathelweni eziphambili, kufaka phakathi imishanguzo. Iyanciphisa ubukhulu be-tumor, futhi igwema ukusakazeka kwamangqamuzana omdlavuza. Le ndlela ibuye ihlotshwe nemiphumela emibi.
Ukwelashwa komdlavuza wesi-prostate kwa-Israyeli kunemisebenzi ephakeme kunazo zonke emhlabeni - cishe ngo-90%, naphezu kobunzima ekutholakaleni nokutholakala kwalesi sifo ngesikhathi esifanele. Ukuze kutholakale ukuvimbela kanye nokutholakala kokuqala kwalesi sifo, ukuvakashelwa njalo ku-urologist kunconywa, okuyinto yamadoda angaphezu kweminyaka engamashumi amahlanu ubudala efaneleka njalo ngonyaka.
Umdlavuza we-penis: i-etiology, imitholampilo kanye nokwelapha
Umdlavuza wegum: izimpawu, ukwelashwa, ukubikezela
I-Cell Phone Tait In Self Self
Impilo yabesifazane. Isifo sofuba
Izikhukhula zeFrance ze-puff pastry
Polyester - material zokwenziwa nge izakhiwo esiyingqayizivele
Chalk Lake - izithombe, ukubuyekezwa kanye izinkomba
Uviniga Ingqikithi: kangakanani isithakazelo yindlela ukuzalela nendlela ukubala
Isilinganiselwa ukudla zonke izilimi. Top imodeli - nokwethenjelwa izinga
Ihhotela Linda Seaview Ihhotela 4 * (Hainan, China): incazelo, amasevisi, izithombe kanye nokubuyekeza
Stenosis we umphimbo: Usizo lokuqala
Kwemali kanye Credit imiqondo ethile futhi essence zabo
Kanjani imizamo engu-